Facebook, Twitter, Pinterest နှင့် LinkedIn တို့တွင်အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်သောနည်းဗျူဟာများ Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 2, 2014 တနင်္ဂနွေ, ဇန်နဝါရီလ 15, 2017 Douglas Karr
စျေးကွက်သမားအများစုသည် ၄ ​​င်းတို့၏အကြောင်းအရာများထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်လူမှုရေးမြှင့်တင်ခြင်းများကိုသေနတ်ဖြင့်ပစ်သတ်ခြင်းနည်းလမ်းကိုအသုံးချနေသော်လည်းအတွေ့အကြုံများကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည့်အရင်းအမြစ်များကိုသင်အသုံးချနိုင်လျှင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များကိုမောင်းနှင်သည့်မဟာဗျူဟာများရှိသည်။
Pagemodo လူကြိုက်အများဆုံးလူမှုကွန်ယက် (၄) ခုစီတွင်အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်ထိပ်တန်းအချက် ၅ ချက်ပါသောလူမှုမီဒီယာလိမ်လည်မှုစာရွက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်အောက်ပါအချက်အလက်များကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ သင်တစ်ကြိမ်သာဖတ်သည်ဖြစ်စေ၊ browser တွင် bookmark ဖြစ်စေ၊ ၎င်းကို print ထုတ်။ သင်၏ရုံးခန်းတွင်တင်ထားသည်ဖြစ်စေသင်တို့၏လူမှုရေးစျေးကွက်ကိုအနည်းငယ်ပိုမိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်အောင်ကူညီလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။
Facebook အကြောင်းအရာ ရုပ်ပုံများ၊ ပြိုင်ပွဲများနှင့်အဆုံးသတ်ဝါကျများကဲ့သို့စကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအပြုသဘောဆောင်သည့်အကြောင်းအရာသည်ပိုမိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
Pinterest အကြောင်းအရာ - သင်၏နောက်လိုက်များအားအထောက်အကူဖြစ်စေပြီးလူနေမှုပုံစံစသည့်ဆက်စပ်သောခိုင်မာသောပုံရိပ်များသည်အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်သည်။
LinkedIn အကြောင်းအရာ - အဖွဲ့များကိုပူးပေါင်းပါ ၀ င်ခြင်းနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုနှင့်စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုတိကျသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးအပ်ခြင်းသည်ပိုမိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုဖြစ်စေသည်။
Twitter အကြောင်းအရာ - link များ၊ ရုပ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများသည် tweets များကိုမောင်းနှင်သည်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်းများကိုစောင့်ကြည့်ပြီးအရေးကြီးသောပြောဆိုမှုများတွင်ပါ ၀ င်ပါ။သုတေသနနှင့်အသုံးပြုမှု hashtags!) ။
Tags: Facebook ကlinkedinPinterestလူမှုရေးအကြောင်းအရာဆိုရှယ်မီဒီယာအကြောင်းအရာတွစ်တာ
ဒီဇင်ဘာ 3, 2014 မှာ 12: 53 AM
အမြဲတမ်းလို Great Info graph !!!!